Himannaawwan 11 kan irratti dhiyaate hoggantuun duraanii Mayaanmaar, himannaa jalqabaatiin hidhaa waggaa afuriin akka adabamtu itti murtaa'e.
Aang Saan Suu Kii viidiyoon mana murtiitti dhiyaatte
Raayyaan Ittisa Biyyaa bakkawwan Amaaraafi Affaar humnoota TPLFn qabamee ture gadhiisisuuf duula jalqabeen bakkawwan dabalataa to'annoo isaa jalatti deebisee galfachuu beeksise.
Maqaan ispoorteesitoota ciccimoo Afrikaa badhaasa BBC 2021'f kaadhimamanii ifoome-Isinis filachuu dandeessu
Paakistaanitti lammiin Sirilaankaa amantii arrabsuun shakkame daboodhaan haala sukanneessaan Jimaata darbe reebamee erga ajjeefamee booda reeffa isaatti ibiddi qabsiifame.
6 Muddee 2021
Qorichi sammuu hadoochu paarlaamaa UK keessatti argamuu poolisiin qorachuufi
Af-yaa'iin paarlaamaa UK dhimmi qorichi sammuu hadoochu argamuu "akka malee yaaddessaadha" jedhan.
Miseensi Koongirasii US suuraa ayyaanaa qawwee qabatee ka'e balaaleffatame
Suuraan maatiin misensa Koongirasii Ameerikaa Toomaas Maasee ayyaana waggaaf qawwee qabatanii ka'an mormii kaase.
Weerarri fuulduratti mudatu koroonaavaayirasii caalaa hamaa akka tahu, namoota talaallii Astraazanakaa hojjetan keessaa tokko kan taate akeekkachiifte.
Hogganaan duraanii garee finciltoota beekamoo Kolombiyaa haleellaa gaggeeffameen Venezuweelaa keessatti ajjeefamuu miidiyaaleen biyyattii gabaasan.
US fi michoonnishee Taalibaan humnoota nageenyaa duraanii Afgaan ajjeesuu akka dhaabuuf akeekkachiisan
Raashiyaan Yuukireen irratti ' haleellaa bal'aa gaggeessuu' akka dandeessu US akeekkachiifte
CNN gaazexeessaasaa buleessa obboleessasaa gargaare jechuun ari'e
Ministeera Raayyaa Ittisa Biyyaatti qindeessaa Ol aanaa Hojii ijaarsa Raayyaa Ittisa biyyaa kan tahan Letenaal Jeneraal Baacaa Dabalaee dhimma waraana humnoota TPLF waliin godhamu irratti gaaffiif deebii addatti BBC waliin godhan irratti 'mariin nageenyaa dhimmakoo miti, hojiin koo waraanuudha jedhan.
'Sudaan TPLF hin deeggartu'-Abdel Fattaa al-Burhaan
Dursaan Mana Maree Walabaa Sudaan Abdel Fattaa al Burhaan, Kaartum humnoota TPLF mootummaa Itoophiyaa wlaiin wal waraanaa jiran hin deeggartu jedhan.
Humnoonni mootummaa Itoophiyaa magaalaa hambaa UNESCO taate Laalibalaa baatilee afur dura finciltootaan qabamtee turte deebisanii to'achuu beeksisan.
Mootummaan magaalaa seena qabeettii Laaliibelaa dabalatee naannoo Affaariifi Amaaraa keessatti bakkawwan murteessoo ta'an deebisee to'achuu ibsus, hidhattoonni TPLF ammoo 'tarsiimoo sirreeffachaa jirra' jedhan.
Bakkawwan to'annoo mootummaa jala galanitti sa'aatiin itti socho'an daangeffame
Waraana Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiruun bakkawwan humnoota mootummaa jala galanitti sa'aatiin itti socho'uun hayyamamu daangeffamuu isaa Iiziin Labsii Yeroo Muddamaa Guutummaatti To'atu beeksise.
Humni Ibsaa Itoophiyaa isa TPLF Madda Anniisaa Takazee irratti haleellaan raawwateera jechuun himate soba jechuun himaticha kuffise.
MM Abiy Ahimad gara adda waraanaa duuluu fi waraana hogganuun murtee "waraana hammeessuu" miti jedhe waajjirri MM Itoophiyaa. Dabalataan, dhaabbanni miidiyaa hawaasummaa Tiwitarii sagalee 'deeggartoota Itoophiyaa' ukkaamsaa jira jechuun mootummaan komateera.
Itoophiyaan finciltoota Tigraay Sudaanii as ce'an malee loltoota Sudaan hin haleelle jette
Mootummaan Itoophiyaa daangaa biyyattii Sudaan waliin daangessu irratti finciltoota Tigraay lo'anii seenan rukute malee loltoota Sudaan irratti haleellaa hin banne, dhimmas irraa hin qabu jedhe.
29 Sadaasa 2021
Qeeqxonni namoonni kumaatamatti lakkaa'aman Finfinneetti akkaata sirrii hin taaneen hidhamuu kan qeeqan yoo ta'u, magaalicha keessatti garuu hidhamuun isaanii deeggarsa hedduu kan argate fakkaata.
Waraana Kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru irratti raayyaa ittisaa dursuun kan hirmaataa jiran Ajajaan waliigalaa humna waraanaa Itoophiyaa fi Ministirri Muummee Abiy Ahmad bakka amma ga’anii jiranirraa ibsa miidiyaalee biyya keessaaf kennan.
Oggeettiin hubannoo nam-tolche (Artificial Intelligence) Dr Timniit Gabru Jidduugala qorannoo teeknolojii walabaa hundeessite.
Dhalataan Gaambeellaa fi miseensi mana maree magaalaa Oostin, Minestoota Obaalaa Obaalaa Roobii darbe wayita pireezidantichi hojiif gara Minisootaa dhaqan carraa wal arguu argachuu hima.
Shamarreen ganna 19 lammiin Sudaan Kibbaa Naayaabeel Jook kaampii baqattootaa Gaambeellaa Jaawwiitti argamu keessa jiraatti.
UNWTO yaa'ii waggaa Ispeen magaalaa Maadiriiditti taa'aa jiruun 'gandoota tuurizimii filatamoo' 44 biyyoota addunyaa gara garaarra filatamaniif beekamtii kennee jira.
Dhorkaan liqaa ji’oota afuriif hojiirra oolee ture guutummaan guutuutti ka’uusaa Baankiin Biyyaalessaa Itoophiyaa torbee kana beeksiseera.
Dhaabbanni miidiyaa hawaasummaa guddichi Twitter akkaawuntii qabiiyyeewwan Itoophiyaaf deeggarsa kennan qajeelfama dhaabbatichaa cabsuun himatee haquu isaa BBC'f mirkaneesse.
Yuunivarsiitiin Gondar Doktora Kabajaa Dr illeeniif kenne kan haqe, yaada isaan viidiyoo tibbana miliqee bahe jedhame kan dippiloomaatota biyyoota Lixaa waliin marii godhame irratti kennan hordofee ta'uu hime.
Lola Kaaba Itoophiyaatti hammaate hordofee torban muraasa dura akka waan magaalaan Finfinnee to’annoo hidhatootaa jala galuuf jirutti miidiyaaleen idil addunyaa gabaasan jiru. Jiraattonni magaalichaafi kaan waa’ee kanaafi waan lafa jiru maal himu?
Dhaabbati Fayyaa Addunyaa biyyoonni akaakuu koronaavaayirasii haaraadhaan akka hin rifanne hubachiise
Dhiibbaa weerarri Koronaavaayirasii HIV/AIDS ittisuurratti qabu
Dhukkubni HIV AIDS erga addunyaarratti mul'achuun isaa gabaafamee wagga afurtama guuteera.
'Qorichi aadaa HIV irraa akka na fayyisetti na amansiise'
Milkaa'inni guddaan argamellee, HIV ilaalchisuun ouun sobaa ammallee tatamsa'aa jiran namoonni akka hojii malee ta'an, michuu jireenyaan ala ta'an, akkasumas wallaansa sirrii ykn qorannoo fayyaa maluufiin hin argannee taasisaa jira.
Biyyoonni Awurooppaa yeroon talaallii dirqama godhan amma-Qondaala EU
Biyyoonni miseensota Gamtaa Awurooppaa ta'an akaakuu koronaavaayirasii 'Omicron' qolachuuf jecha talaallii dirqamaan kennuu qabu jedhan Hooggantuun Komishinii Gamtichaa Ursula von der Leyen.
Akaakuun Covid haarofti 'Omicron' akkamiin adda baafama?
Gosa laaboraatoorii akkamii keessatti akka godhamerratti hundaa'uun qorannoo PCRn adda baafamuu danda'a.
Akaakuun koronaavaayirasii Omicron uummata addunyaa hedduu hubuu danda’a-WHO
Dhaabbati Fayyaa Addunyaa(WHO) akaakuun koronaavaayirasii haaraa Omicron jedhamuu saffisaan namoota hedduu kan faaluu fi balaansaas olaanaadha jechuun akeekkachiise.
Dhorkaan imalaa atattamaan kaafamuu qabaata- Pirezidaantii Afriikaa Kibbaa
Pirezidaantiin Afriikaa Kibbaa Siiril Raamaafoosaan tarkaanfiin UK fi Ameerikaa dabalatee fudhatamee kan hinbarbaachifnee fi loogeessaadha jedhan.
Afrikaan Kibbaa gosa Covid haaraa waan argatteef 'adabamaa' jirti
Sababa gosa Covid haaraa yaaddessaa ta'e - Omicron, jedhamu adda baasee irra gaheef osoon jajjabeeffamu qabuu adabamaan jira jechuun Afrikaan Kibbaa komatte.
Gosti Covid-19 haaraan Afriikaa Kibbaatti mul'ate yaaddoo uume
Gosti vaayiirasii Covid-19 B.1.1.529 jedhamu Afriikaa Kibbaatti mul'ate haaraan ammas deebiisee yaaddoo olaanaa uumuunsaa ibsame.
Ka’umsi Covid-19 tasumaa baramuu dhiisuu mala jedhan dhaabboti basaasaa Ameerikaa
Dhaaboti tikaa Ameerikaa madda ykn ka’umsa Koronaavaayirasii tasumaa adda baasuu dhiisuu dandeenyaa jedhan. Tahus meeshaa namoota miidhuuf mala baayolojikaalaan tolfame akka hin taane garuu himaniiru.
30 Onkololeessa 2021
Maanguddoo Indiyaa waggaa 104tti mana barumsaa seenan
Maanguddoon Indiyaa waggoota hedduuf mana barumsaa galanii barreessuu fi dubbisuu barachuuf hawwaa turan umriinsaanii waggaa 104tti hawwiisaanii milkeessuu danda'aniiru.
Bezaawwiit Xilaahuun hanga waggaa 12 guuttutti daa’ima hiriyyoota ishee waliin burraaqxuufi dhukkubsattees hin beekne turte.
Hakimiin miila maamilashee wallaanaa jirtu dogoggoraan isa fayyaa murte maallaqaan adabamte
Awustiraaliyaatti hakiimni baqaqsanii wal'aanan jalqaba bara kanaatti miila fayyaa dhukkubsatarraa dogoggoraan muran maallaqaan adabaman.
Qaala'iinsi gatii fi rakkooleen sarara dhiyeessii magaalota 173 qorannoon keessatti godhame keessatti jireenyi akka hammaatu taasisaniiru.
Toomaas Taabaanee haadha warraa isaanii duraanii ajjeesuuf qindeessaniiru jedhamuun himataman
Miseensi paarlaamaa ciniinsuurra turte saaykilii ooffattee hospitaala gahun deesse
Juulii Annee Geenter jedhamti. Miseensa Paarlaamaa Niiwuuziilaand yoo taatu konkolaataa caalaa saayikilii fayyaamuu deeggarti. Dubartiin kun Dilbata darbe ciniinsuun wayita ishee qabu konkolaataa dhiistee saayikiliishee ooffattee hospitaala akkuma geesseen sa'aatii tokkoon booda deesse.
Maagdaalenaa Andersan torban darbe keessa battaluma aangoo qabatteen sa'aa tokko booda erga aangoo gadhiifteen booda ammas aangootti deebii'uuf miseensoota mana mareetiin deeggaramte.
Caba dubartii gaa'elaan ala deesse jedhamuun beekamtiishee malee daa'imnishee guddisa kennamee
Dubartiin Hindii barbaachi isheen mucaa ishee jalaa badee waggaa tokkoof taasisaa turte dhiheenya kana kana mana murtiitiin mucaashee argachuun gammachuu itti uumuu dubbatti.
Daldalaan ganna 52 mana gamoo beekamaa Indiyaa Taaj Mahaal jedhamu fakkaatu haadha warraasaa waggaa 27'f waliin jiraateef ijaare.
Gurgurtaa kuruphisaa xiyyaararratti taasifamu hordofee hojjetoonni ari'aman
Daandiin Qilleensaa Yugaandaa kuruphisa nyaataaf qophaa'e xiyyaara balali'aa jiru keessatti gurgurame dhorke.
Daa'imman reefu dhalatan of eeggannoon sukkuumuun lubbuu isaanii akka baraaru beektuu?
Aadaa warra kibba Eeshiyaatti daa'imman sukkuumuun waan baratamedha. Amma ammoo karaa saayinsiitiin qorannoowwan barsiifata kana deeggaran bahaa jiru.
Yuunivarsiitiin Finfinnee dhiheenya kana namoota yuunivarsiitichaa eebbifamanii humnoota shororkeessitootaa deeggaran irratti tarkaanfii hanga ragaa barnootaa isaanii haquutti akka fudhatu erga akeekkachiiseen booda dhimmichi dubbii ijoo ta'eera.
Gurraachonni Ameerikaa afur himannaa sobaatiin hidhaman waggaa 70 booda bilisa jedhaman
Lammiilee Ameerikaa gurraachoonni afur bara 1949 ture dubartii adii tokko butuun gudeedaniiru jedhamuun kan himatamanii turan. Amma garuu waggaa 70 booda bilisa bahan.
Abbaa warraa haadha warraa waliin jiraatu osoo fedhii ishee malee yookiin faallaan haati warraa abbaa warraa waliin fedhii malee saal qunnamtii yoo raawwatte gudeeddii jedhamaa?
Namoota fiilmii Indiyaa (Bollywood) daawwataniifi jaallataniif maqaan Shah Rukh Khan jedhu haaraa itti hin ta'u. Maaliif akkasiin akka jaalatamu beeksu laata?
Shakkiin dubartii tokkoo akkamiin dararaa daa'ima waggaa torbaa irratti qaqqabe saaxile?
Himatamtuun Ruudee Dayyaas ibidda feestaaliitti qabsiistee maandajaarra kaa'uun daa'imni guddisuuf ofitti fudhatte irra teessee akka gubattu taasifte.
Facebook fi Twitter Itoophiyaatti maaliif garmalee qeeqamu?
Qeeqxoonni dhaabbileen miidiyaalee hawaasaa kunneen waraanaa Itoophiyaatiin wal qabatee haasaa jibbiinsaa dhorkuuf hojii gahaa hin hojjannee jedhu.
18 Sadaasa 2021